Alshabaab oo Weeraro Khasaare Geystey Ka Fulisey Gudaha Kenya – Radio Daljir
Alshabaab oo Weeraro Khasaare Geystey Ka Fulisey Gudaha Kenya
Agoosto 3, 2017 8:52 b 0
Hal Askari oo Ka tirsan Ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa la dilay halka Laba Gaari oo ay lahaayeen Laamaha amniga lagu gubay weerar maanta oo Khamiis ah ka dhacay Degmada Lafey oo ka tirsan ismaamul Goboleedka Mandera.
Kooxda weerarkaas Ka dambeysay oo la aaminsan yahay in ay gacan saar la leeyihiin Dagaalyahanada Al-shabaab ayaa sidoo kale la baxsaday Gaari ay lahaayeen Ciidamada Booliska ee aagaasi.
Saldhiga Booliska ee la weeraray ayaa waxaa lahaa Ciidamada Maamulka ee loo yaqaan Ap-da oo ka mid ah waax ka tirsan Booliska dalkaasi Kenya.
Mas’uuliyiinta Laamaha amniga Magaalada Mandera oo booqday kadib weerarka ka dhacay Degmada Lafey ayaa waxaa ay sheegeen in weerarkaasi ay ka dambeeyeen Dagaalyahanada Al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya.
Weerarkan ayaa sidoo kale waxa uu dhaliyay khasaare burbur ba,an dhaliyay oo soo gaaray saldhiga Ciidamada Booliska ee degmada Lafey, iyada oo 12 Sarkaal oo ku sugnaa halkaasi ay iska caabiyeen weerarkaasi.
Dableyda weerarka qaaday ayaa saraakiisha amaanku waxa ay ku sheegeen in tiradoodu ay gaareyso 50 Ruux, kuwaasi oo ku hubeysnaa hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa dhankooda waxa weerakaas looga dilay dhowr dagaalyahan, inkastoo aan la cayimin tirada.
Isku Duwaha Dhanka ammaanka ee Gobolka Waqooyi Bari Amb. Maxamud al Saleh oo War-saxafadeed uu soo saaray Kadib Weerarkaas ayaa Warbaahinta u Xaqiijiyay In Ciidamo badan oo gurmad ah ay Dowladda u Dirtay Degmada Lafey si ay jawaab kaga bixiyaan weerarkaasi.
Mr. Saleh ayaa waxa uu intaa raaciyay in Dagaalyahanada Gaariga la baxsadeen ay gacanta Dowladda lagu soo celin doono, maadama uu ku xiran yahay qalab bixinaya tilmaamaha halka uu yaalo.
Shacabka Ku dhaqan Degmada Lafey ayaa waxa ay sheegeen in Dagaalyahanada ay ku arkeen aagaasi, iyagoo ku dhuumaaleysanaya habeenimadii Arbacada ayna ku wargaliyeen laamaha amniga.
Madaxweyne Trump oo Saxiixay Xayiraad Lagu Soo Rogey Ruushka